Amaqela e-WhatsApp eSpain. Amakhonkco amaqela angcono eSpanish?
17 Ukufundwa kweMin
Ukuba unguspanish okanye uhlala eSpain, ngaphakathi grupomania.net Senze uluhlu lwamaqela e-WhatsApp ukuze ujoyine ngcono amaqela e-whatsapp esuka eSpain
1 Amaqela e-whatsapp eSpain ??
2 Amakhonkco eqela le-WhatsApp Spain
3 Amaqela omculo we-whatsapp eSpain
3.1 Iliwa / elinzima / lomculo kunye neziqhulo zabahlobo
3.2 Igumbi elikhulu alifi
3.3 [imeyile ikhuselwe] UMelendi
3.4 Wonke uMculo, iqela elisebenzayo!
3.5 I-Emos, gothic kunye nee-rockers
3.6 Elona qela li-RAP
3.7 Iliwa vs Amandla aPhezulu 80a90
3.8 Khumbula isandi
3.9 LONTO STOPA
3.10 INKXASO YOKUXHASA UMGAQO
3.11 Akukho nto inzulu yeHungary
3.12 Izingane ezilahlekileyo
3.13 Iimvumi zaseSpain
4 Amaqela ooWhatsapp eSpain
4.2 Intsapho enkulu
4.3 Ubuhlobo baseSpain
4.4 Incoko zamanye amazwe
4.5 I-Extremadura 2019
4.7 Abahlobo Spain
4.8 Abahlobo Mallorca
4.9 I vibes ezilungileyo
4.10 Iziqithi ezincinci ze-canary
4.11 UAlicante noMurcia
4.12 Ubuhlobo bokwenene Tenerife
4.13 Seville wemka
4.14 Wamkelekile kwiparadesi
5 Iqela le-whatsapp lezemidlalo eSpain
5.1 Amakhonkco ezemidlalo
5.2 Ibhola ekhatywayo yehlabathi
5.3 Ukubheja kubaphumelele
5.4 Buyela eParkour
5.5 IOmocross yaseAustralia
5.6 Ukuhamba ngebhayisikile iMadrid kweyona ndawo ilungileyo
5.7 Iqela laseburhulumenteni le-NBA
5.8 I-Murcia Tennis
5.9 Umhlaba weemoto
5.10 I-Paddle Costa del Sol
5.11 I-Futsal Sevilla
6 Amaqela e-whatsapp geeks eSpain
6.1 Intsapho yeGeek
6.2 Umhlaba we-Geek
6.4 I-Anime kunye nemidlalo yevidiyo
6.5 IAlicante geeks
7 I-whatsapp gamers Spain amaqela
7.1 Kwimeko apho uya kufumana isithukuthezi
7.2 Oonyana be-Anarchy
7.3 Abadlali bePS4
7.4 League of Amabali kunye nokunye
7.5 I-Nintendo 3ds gamers
7.6 Fantasy lokugqibela
7.7 I-Fortnite iYurophu
8 Amaqela e-whatsapp abafundi baseSpain
8.1 Abafundi behlabathi
8.4 Umbuzo wokufunda odibeneyo
8.6 Ukufundwa kweAmena
8.7 Abahlobo boncwadi
9 Amaqela e-WhatsApp ahlekisa eSpain
9.1 Umhlobo weJurassic
9.2 Iqela lexesha
9.3 Memes ezihlekisayo
9.4 Ukuhleka nokuhleka
9.5 Iqela lesitika
10 Amaqela e-whatsapp yokuhamba eSpain
10.1 Iinqanawa ezininzi zeenkcubeko
10.3 Ukuhamba ngeYurophu
11 Nyusa amaqela e-WhatsApp eSpain
12 Yenza iQela le-WhatsApp Spain
Amaqela e-WhatsApp eSpain ??
Esi sithuba sijolise kubantu baseSpain okanye abantu abahlala eSpain. Apha unokufumana eyona nto intle amaqela e-whatsapp Uzalelwe eSpain
Apha unokufumana amaqela avela eSpain emixholo eyahlukeneyo apho ungadibana khona nabantu kwaye wenze nabahlobo ngeenketho zakho ezifanayo ezivela kwindawo yakho, kwisixeko okanye eSpain.
Amakhonkco eqela le-WhatsApp Spain
Ngaphambi kokungena kulo naliphi na iqela le-WhatsApp eSpain, khumbula ukuba kubalulekile ukuba uqale ufunde imigaqo yethu yokusebenzisa kunye neyabucala.
Ezi zi Amaqela e-WhatsApp aphuma eSpain okanye ayilwa ngabaseSpain.
Amaqela omculo we-whatsapp eSpain
Okulandelayo unayo amaqela omculo we-whatsapp Ispanish ebalaseleyo. Unokufumana amaqela amaninzi kwi Amaqela omculo we-whatsapp eSpain.
Iliwa / elinzima / lomculo kunye neziqhulo zabahlobo
Inkcazelo: Nabani na othanda umculo, ukudibana nabantu kunye nokuzonwabisa unendawo yakhe apha.
Igumbi elikhulu alifi
Ingcaciso: Ngumculo we-elektroniki.
[imeyile ikhuselwe] UMelendi
Inkcazelo: Iqela le-WhatsApp [imeyile ikhuselwe] UMelendi
Wonke uMculo, iqela elisebenzayo!
Inkcazelo: umculo owufunayo
I-Emos, gothic kunye nee-rockers
Inkcazelo: Iqela le-WhatsApp ye-emos, gothic kunye nomculo we-rock
Elona qela li-RAP
Inkcazelo: Iqela le-WhatsApp lelona qela li-RAP
Inkcazo: I-whatsapp Rock vs Amandla aphezulu e-80a90
Ingcaciso: Iqela le-WhatsApp lokudlula kunye nokwabelana ngomculo
Inkcazelo: Iqela labantu abathanda i-Estopa.
INKXASO YOKUXHASA UMGAQO
Inkcazo: Iqela lokuxhasa ngomculo umgibe waseSpain
Akukho nto inzulu yeHungary
Inkcazelo: Ngabalandeli bakaHungary kuphela kwaye thetha ngayo
Ingcaciso: Iqela le-WhatsApp elinikezelwe kuphela kwiqela laseSouth Korea labantwana baseKpop Stray.
Inkcazo: Eli qela lelabantu abanokudlala isixhobo somculo, baqambe amanqaku, bacule, bathande ukwenza iingoma, ... Le yimbombo yakho yomculo.
Amaqela ooWhatsapp eSpain
Inkcazelo: Iqela le-WhatsApp lobuhlobo kunye nee-vibes ezilungileyo.
Inkcazelo: Iqela le-WhatsApp lobuhlobo eSpain.
Incoko zamanye amazwe
Inkcazelo: I-whatsapp yeqela lobuhlobo bamanye amazwe.
Inkcazelo: Iqela lobuhlobo kunye nantoni na eza ebantwini evela e-Extremadura nakumaphondo angabamelwane ukuba bahlangane ngomso.
Inkcazo: Iqela labantu abavela eHuesca nakwimimandla engqongileyo, abafuna ukudibana nabantu bendawo yobuhlobo, uthando ... njl.
Inkcazelo: Eli qela lenza ikakhulu abahlobo eMallorca (kwiBalearic Islands, eSpain).
I vibes ezilungileyo
Inkcazelo: Iqela le-WhatsApp laseJerez. Iqela labahlobo ukuze wonwabe, dibana nabantu behleka kwaye benze ii-hangouts.
Iziqithi ezincinci ze-canary
Inkcazelo: Eli qela kukuhlangana nabantu, ukwenza hangouts, njl. Phakathi kweminyaka eli-15 ukuya kwengama-20. Unokwenza ogaxekile kwi-imeyile yakho ngaphandle kokuba unzima. Sukuhlukumeza mntu kwiqela kwaye ulwe ngaphandle.
Inkcazelo: Iqela le-WhatsApp lobuhlobo eAlicante naseMurcia. Abantu abaphakathi kweminyaka eli-18 nama-37 ubudala.
Ubuhlobo bokwenene Tenerife
Inkcazelo: Iqela labantu Tenerife abafuna ukuncokola kunye nokuhleka okuhle kwaye zonke vibes elungileyo.
Inkcazelo: Iqela le-WhatsApp lokuhlala eSeville.
Inkcazelo: Iqela le-WhatsApp labantu abavela e-Barcelona nakwimimandla ejikelezileyo. Eli qela lisekwe kwintlonipho ngobuhlobo, ukukwazi ukwenza izinto kunye kwaye ke nokudibana nabantu abanokuba ngabahlobo bonke.
Iqela le-whatsapp lezemidlalo eSpain
Inkcazo: Liqela lokudlula amakhonkco ezemidlalo azo zonke izimbo, ibhola ekhatywayo, ibasketball, irali, njl
Ibhola ekhatywayo yehlabathi
Inkcazo: Iqela le-WhatsApp layo yonke into el mundo yebhola ekhatywayo.
Ingcaciso: Abo bangabelaniyo nge-pronoctics yabo, okanye bangasebenzi, baya kugxothwa, apha sonke sabelana ngokubikezela kwangaphambili kwemini kwaye sizame ukunceda njengabazalwana abalungileyo.
Inkcazelo: Eli qela lepaki.
Inkcazo: Eli qela le abathandi i-motocross, kuphela ngabantu abavela kwikomkhulu laseAlmería nakwingqongileyo.
Ukuhamba ngebhayisikile iMadrid kweyona ndawo ilungileyo
Inkcazelo: Kuphela ngabantu abavela eMadrid. Ubudala beminyaka engama-20.
Iqela laseburhulumenteni le-NBA
Ingcaciso: Iqela eliza kuthetha nge-NBA, ekupheleni komdlalo wokugqibela wosuku, iziphumo zayo yonke imidlalo yolo suku ziya kudluliswa
Inkcazo: Iqela le-WhatsApp lokuhlangana ukuze lidlale intenetya eMurcia.
Inkcazelo: Iqela le-WhatsApp injini kuphela.
I-Paddle Costa del Sol
Inkcazo: Iqela le-WhatsApp lokudlala i-paddle tennis eTorremolinos nakwiCosta del Sol.
Inkcazelo: Abantu bafunwa ukudlala i-futsal e-Seville izihlandlo ezibini okanye ezintathu ngeveki e-Bami okanye Hytasa 5 vs 5 okanye ngo-nxantathu, i-vibes elungileyo.
Amaqela e-whatsapp geeks eSpain
Inkcazelo: Eli liqela le-otaku apho unokuthetha ngako konke (nangona ngokucacileyo kuyinto eqhelekileyo ukuthetha ngento ye-anime okanye ye-geek). Ndijonge abantu abangaqhelekanga nabanomdla obahlukileyo kuluntu luphela, ke eli qela liya konwaba ngakumbi. Ndikhuthaza nonke ukuba nizibandakanye.
Inkcazelo: Iqela lokuzonwabisa kunye nobuhlobo, ukuthetha ngezinto ze-geeky kunye nokudibana nabantu.
Inkcazelo: I-whatsapp yeqela lika-Andalusian geeks abathanda imanga, i-anime nenkcubeko yaseJapan ngokubanzi.
Inkcazelo: I-whatsapp yeqela lemidlalo ye-anime kunye yevidiyo.
Inkcazelo: I-whatsapp yeqela le-geek ngokukhethekileyo ukusuka Alicante ukudibana kunye nokuthetha. Akukho minyaka ingaphezulu kwama-25 ubudala.
I-whatsapp gamers Spain amaqela
Kwimeko apho uya kufumana isithukuthezi
Inkcazelo: Iqela le-WhatsApp elinolwazi lweFortnite
Inkcazelo: Iqela lengxoxo yemidlalo kunye nokudibana kwabantu abatsha.
Inkcazo: Iqela le-whatsapp le-ps4 lokuthetha kunye nokudlala kunye.
League of Amabali kunye nokunye
Inkcazelo: Liqela elenzelwe abadlali, okanye hayi, nokuba uyintoni na, uyakwamkeleka, ungene kwaye uyonwabele ukudlala okanye ukudibana nabantu.
I-Nintendo 3ds gamers
Inkcazelo: Iqela le-WhatsApp labahlaziyi be-Nintendo.
Inkcazelo: Iqela ukuba babelane idatha, iindaba, curiosities nayo yonke enye into malunga saga entle.
Inkcazelo: Iqela leWhatsApp leFortnite.
Inkcazelo: Iqela leWhatsapp lokudlala i-gta5 kwi-ps4.
Inkcazelo: I-whatsapp Sims4 iqela.
Amaqela e-whatsapp abafundi baseSpain
Inkcazelo: Iqela apho sithetha ngoncwadi. Sithetha ngeencwadi kunye nababhali esizithandayo, senza kwaye sicela iingcebiso, njl.
Inkcazo: Ukutshintshwa kwezimvo kwiincwadi (ngaphandle konqangi).
Ingcaciso: Iqela labaqalayo kwilizwe lokubhala okanye abo banqwenela ukwenza njalo. Imisebenzi, ukhuphiswano phakathi kwamalungu okanye ukuthetha ngamabali ethu, ukufunda komnye nomnye kunye nokuphucula.
Umbuzo wokufunda odibeneyo
Ingcaciso: Iqela eliFundayo lokuFunda ukukhetha ngevoti 1/2 yeencwadi anokuzifunda ngenyanga. Vula naluphi na uhlobo, ngaphandle kobude bomsebenzi.
Inkcazelo: Iqela leWhatsapp labathandi bokufunda.
Ingcaciso: Iqela le-WhatsApp elizinikezele ekwabelaneni nasekwenzeni izimvo ngeencwadi esizifundileyo.
Inkcazelo: Iqela le-WhatsApp labathandi bembali yenoveli.
Amaqela e-WhatsApp ahlekisa eSpain
Inkcazelo: Iqela labantu abangaphezu kwe-18, ukuba ufuna ukudibana nabantu abalungileyo.
Ingcaciso: Iqela labaqokeleli beqela labahlobo abavela kulo lonke elaseSpeyin liza kwaye lizonwabise lokwazi abantu abalungileyo esikulindeleyo.
Inkcazelo: Iqela leWhatsApp leJoke, iividiyo, izitikha kunye neememori ezipholileyo.
Inkcazelo: Eli qela lizama ukuhleka nokutshintshiselana imifanekiso ehlekisayo kunye nevidiyo.
Inkcazo: Iqela le-WhatsApp lokuxoxa kwaye wabelane ngazo zonke iintlobo zezitikha.
Inkcazelo: I-whatsapp yeqela lememori.
Amaqela e-whatsapp yokuhamba eSpain
Iinqanawa ezininzi zeenkcubeko
Inkcazelo: Inqanawa yenkcubeko kunye neelwimi ezininzi I-Cultus ihambile ngenqanawa. Wamkelekile kwinqanawa ethembekileyo ngenjongo yokuhamba nokuhlangana nabantu abavela kwihlabathi liphela kunye neenkcubeko zabo. Abantu abavela kuyo yonke iplanethi yamkelekile ukuba babelane namalungu abo ngenkcubeko yabo kunye nendlela yabo yokuphila nolwimi lwabo.
Inkcazelo: Kubo bonke abaqhele ukuhamba kwi-A Coruña ukuya eVigo kwaye bafuna ukugcina ikhomishini kaBlablacar. Sikulindile! Joyina uluntu esilwenzileyo.
Inkcazelo: Ngaba uyafuna ukuthatha uhambo ukutyhutyha iYurophu ehlotyeni kwaye awazi nabani ngoba izihlobo okanye usapho lwakho abakwazi? Joyina! Ukusukela kwiminyaka eli-18 ukuya kwengama-25 ubudala
Nyusa amaqela e-WhatsApp eSpain
Ukuba uzithandile ezi Amaqela e-WhatsApp eSpain, Ndikumema ukuba wabelane ngale posi nabahlobo bakho kwiinethiwekhi zentlalo.
Yenza iQela le-WhatsApp Spain
Ukuba awuyifumani Iqela le-WhatsApp elivela eSpain Yintoni oyikhangelayo, ndiyakumema ukuba uyile ngokwakho kwaye wabelane ngayo kwiwebhusayithi yethu ukwenzela ukuba ongezwe abathathi-nxaxheba. Unako Yenza iqela le-WhatsApp eSpain kwaye lipapashe ucofa apha.
Indlela yokulibala uthando ngokweBhayibhile
Lalinjani ityala likaYesu
Kutheni umKristu efanele abhaptizwe
Indlela yokuba nokholo olungakumbi ngokweBhayibhile